काठमाडौं, २८ असार । ६६ वर्षको उमेरमा हजुरबा बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको दुईवटा ट्वीट आयो ।
शब्दको सीमितता हुने ट्वीट सन्देशहरुमा उनले ‘२२औं शताब्दी’को चिन्ता र परिकल्पना राख्न भ्याए । पहिलो ट्वीटमा उनले हजुरबा भएको जानकारी दिए । छोरी मानुषी यमी भट्टराईको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकलाई धन्यवाद दिए ।
यो औपचारिकतासँगै उनले अर्को वाक्य लेख्न भ्याए । ‘अहिलेसम्म हाम्रो परिवारमा २२औं शताब्दी देख्ने सम्भावना भएको एकमात्र शिशुको सुस्वास्थ्यको कामना !’
बल्ल हजूरबा भैयो!असार२८गते विहान१०.०५ बजे टिचिंग अस्पतालमा छोरी मानुषी र ज्वाइँ जेकेन्द्रलाई पुत्रलाभ भएको छ! डा.गीता गुरूंग र टिमलाई सफल अपरेसनकालागि धन्यवाद! अहिलेसम्म हाम्रो परिवारमा २२औं शताब्दी देख्ने सम्भावना भएको एकमात्र शिशुको सुस्वास्थ्यको कामना!मानुषी-जेकेन्द्रलाई वधाइ! pic.twitter.com/8YgvKYOhee
— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 12, 2020
डा. भट्टराई हजुरबा भएको खबर पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा बधाईका हजारौं सन्देशहरु आइरहेका छन् । लेखक तथा वामपन्थी बुद्धिजिवी खगेन्द्र संग्रौलाको बधाईलाई रिट्वीट गर्दै भट्टराईले २२औं शताब्दी र नातिप्रतिको चिन्तालाई व्याख्या गर्न भ्याएका छन् ।
‘हजुरबा बनेकोमा बधाइ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद ! नवजात शिशुलाई हेरेर हर्ष र चिन्तामा गमिरहेछु,’ उनले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, ‘१७औं शताब्दीको सामाजिक-सांस्कृतिक धरातलमा टेकेर यसलाई २२औं शताब्दी लायक कसरी बनाउने होला ?’
भट्टराईको विचारमा अहिलेको समाज र मानिसहरु विकृत बनेका छन् र उनीहरु लिंग, जाति, धर्म, जात र राष्ट्रको कूपमण्डुकतामा फसेको छ । उनले आफ्नो नाति यी सबै विकृतिबाट माथि उठेर उन्नत मानव बनोस् चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘लिंग/जाति/धर्म/जात/राष्ट्रको कूपमण्डुकताबाट माथि उठेको उन्नत मानव कसरी बन्ला ? ठान्छु- संघर्ष गर्न सिकोस् !’
सामाजिक सञ्जालमा थरको चासो
भट्टराईले हिसिला यमीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका हुन् । उनीहरुको एक्ली सन्तान मानुषीले आफ्नो आमा र बाबाको थर राखेर यमी भट्टराई लेख्ने गरेकी छिन् ।
यही कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा चासोका साथ प्रश्न उठाइएको छ । एक प्रयोगकर्ताले भट्टराईलाई बधाई दिँदै लेखेका छन्, ‘मलाई चाहिँ मानुषीको छोराको थर कति लामो हुने भो भनेर उदेक लागिराछ । समानताको सिद्धान्तअनुसार उनको थर हुनेछ– श्रेष्ठ यमी भट्टराई ।’
मानुषीले तनहुँका जेकेन्द्र श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी हुन् । अब आफ्नी आमाले जस्तै ती शिशुले आफ्नो नाम राख्न खोजे भने थर लामो हुने र अर्को पुस्तासम्म पुग्दा लामो थर लेखेर भट्टराईका सन्तानले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने भन्दै व्यंग्य समेत गरिएको छ ।